भाइबहिनीसँग झगडा पर्छ ?, यी ५ तरिका अपनाउनुस् « Janata Samachar
भाइबहिनीसँग झगडा पर्छ ?, यी ५ तरिका अपनाउनुस्
प्रकाशित मिति : 27 July, 2019 2:36 pm
काठमाडौं । भनिन्छ अलिअलि झगडाले सम्बन्धमा अझै बलियो बनाउँछ । प्रेमीप्रेमिका, श्रीमान्श्रीमती सँगै दाजुभाई, दिदीबहिनीको पनि झगडा भइरहेकै हुन्छ । यो समाचार पढ्दै गर्दा पनि कतिपयको त झगडा परेर बोलचाल बन्द भएको होला । झगडा भएता पनि उनीहरु पहिलेजस्तै बोलचाल गर्न चाहन्छन् । यहाँ दाजुभाइ, दिदीबहिनीसँगको झगडापछि कसरी सम्बन्ध सुधार्न सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी दिइएको छ ।
१. आफैं पहल गर्नुहोस्ः झगडा परेपछि बोलचाल नहुनु स्वभाविक हो । उनीहरु बोल्न चाहेपनि उनीहरुको इगोले उनीलाई बोल्न रोकिरहेको हुन्छ । यस्तोमा कुराको शुरुवात आफैँबाट शुरु गरेर माफी मागियो भने समस्या आफैं समाधान हुन्छ ।
२. मध्यमार्गी बाटोः झगडा भइसकेपछि दुवैले एकअर्काको कमीकमजोरीको पहिचान गरी सम्बधलाई सही दिशामा ल्याउन सकिन्छ । यसरी कमीकमजोरी आफैंले महसुस गरेमा सम्बन्ध अझै सुमधुर बन्छ ।
३. टप सिक्रेटलाई ध्यान दिनुस्ः झगाडा परेपछि कतिपयले एकअर्काको टप सिक्रेट अरुलाई भनिदिने गर्छन् । यसो गर्नाले मनलाई केहीबेर शान्ति मिले पनि पछि पछुताउनुपर्छ । झगडापछि पनि एकअर्काको टप सिक्रेट मनमा राख्नुनै सुमधुर सम्बन्धको संकेत हुन्छ ।
४. झगडाको कारणः अक्सर मानिसहरु झगडाको समाधान निकाल्ने समयमा एकअर्काको कमजोरी निकाल्ने कोसिस गर्छन् । झगडाको समाधान निकाल्दा एकअर्काको कमजोरी निकाल्नुभन्दा झगडाको मुल कारण पहिचान गरी अब त्यो कारणबाट कहिल्यै झगडा नगर्ने कसम खानु उचित हुन्छ ।
५. उपहारः कुनैपनि सम्बन्धमा फेरि पहिलेजस्तै मिठास ल्याउनको लागि उपहार दिएर इम्प्रेस गर्न सकिन्छ । उपहारको नाममा तपाईंले दिदीबहिनी वा दाजुभाइलाई कपडा, मोबाइल वा अन्य मनपर्ने चिज उपहार दिँदा पनि सम्बन्धमा सुधार आउँछ ।
ठेलामा राखेर म:म बेच्ने व्यक्तिमा कोरोना देखिएपछि हलचल मच्चियो
काठमाडौं । भारतको मध्य प्रदेशको ग्वालियर शहरमा, एक म:म विक्रेताको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ
काठमाडौं । अदालतमा एउटा यस्तो मुद्दा आयो, जसले सबैको दिमाग हल्लाइ दियो। न्यायाधीश समेत भावुक
नेकपामा आजको बैठक निर्णायक !
खासगरी मदन जयन्तीका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा शीर्ष नेतृत्वमा अविश्वास बढेको छ ।
चट्याङ लागेर चारको मृत्यु, सात जना…
घाइतेमध्ये एक जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको नायव प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्राले जानकारी दिनुभएको छ ।
मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने, होसियारी…
भोलि शुक्रबारबाट वर्षा अझ बढ्ने महाशाखाकाे अनुमान रहेकाे जनाइएकाे छ ।
देशका ७७ वटै जिल्लामा कोरोना संक्रमित भेटिएकोमा यी तीन जिल्लामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएकाे छ ।
काठमाडौं पसेका सलह कागको आहारा बने
राजधानीमा पसेको सलह कागले खाइरहेको दृश्यले उपत्यकाबासी काग तिहारको स्मरण गरिरहेका थिए ।
२०७७ असार १८ गतेको राशिफल
मेष– काम अधुरो हुनेछ । झन्झट व्यहोर्नु पर्नेछ । चिसोले स्वास्थ्य वाधा आउनेछ । वृष– यात्राको सुख मिल्नेछ । पारीवारिक…
विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस मनाइँदै
कैलालीमा १ हजार खरका छाना विस्थापन गरिँदै
चट्याङ लागेर चारको मृत्यु, सात जना घाइते